Tanzania: Nin Soomaali ah weerar ku qaaday Safaaradda Faransiiska | KEYDMEDIA ONLINE
Tanzania: Nin Soomaali ah weerar ku qaaday Safaaradda Faransiiska
Xasan Xamza Maxamed oo ah 30 jir, Soomaali ah ayay ciidamada ammaanka Tanzania ku dileen bannaanka hore ee Safaaradda Faransiika oo ku taal Waddada Cali Xasan Mwinyi ee magaalada Daaru-salaam.
TANZANIA - Ciidamada ammaanka ee dalka Tanzania, ayaa toogtay Xasan Xamza Maxamed, oo la sheegay inuu yahay muwaadin Soomaaliyaad, kaas oo weerar ku qaaday Safaaradda waddanka Faransiisku ku leeyahay magaalada Daaru-salaam maanta (Agoosto 25).
Sida uu sheegay Taliyaha Hawlgallada iyo Tababarka Boliska, Liberatus Sabas, Xasan, ayaa inta aan la toogan ka hor Saddex askari oo boolis ah iyo hal qof oo rayid ah ku dilay waddada Cali Xasan Mwinyi oo ka soo jeedda aagga Buundada Selandar, oo u dhaw safaaradda Faransiiska, ugu yaraan lix qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen intii uu socotay rasaas ay is weydaarsadeen booliska iyo ninka weerarka fuliyay.
Ninkaan oo 30 jir ah, ayaa watay laba qori oo nooca daran dooriga u dhaca ah, waxaana aqoonsaday xubnaha qoyskiisa oo doorbiday in magaciisa la sheego Xamza Xasan Maxamed, waxaana la xaqiijiyay inuu degganaa Upanga, Darusalaam.
Aagga Buundada Selandar, oo ah goobta uu weerarku ka dhacay, waxa ay aad ugu dhowdahay Safaaradda Faransiiska, Safaaradda Japan, Safaaradda Kenya, Safaaradda Ruushka, iyo xarumo maaliyadeed sida Stanbic Bank iyo KCB Bank.
Safaaradda Mareykanka ee Daarusalaam ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay ka ag dhawaadaan aagga Upanga, Safaaraddu waxay ka codsatay muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan aagga, iyagoo leh: "Waxaa jira warar sheegaya in iska horimaad hubeysan uu ka socdo meel u dhow Safaaradda Faransiiska ee Waddada Ali Hassan Mwinyi."
In kasta oo Daarusalaam aysan la kulmin weerar argagixiso oo weyn tan iyo qaraxii Safaaradda Mareykanka ee 1998, haddana magaalada dekedda leh, waxa ay mar kasta khatar ugu jirtay duullaanka mintidiinta hubeysan ee ka hawlgala waqooyiga Mozambique iyo Soomaaliya.